तपाइँको ग्राहकहरु गोपनीयता बारे वास्तवमै के सोच्दछन् | Martech Zone
बिहीबार, फेब्रुअरी 27, 2014 बुधबार, फेब्रुअरी 26, 2014 Douglas Karr
मिडिया ड्रोन गर्न र कसरी कम्पनीहरूले प्रयोग गरिरहेका र ठूला डाटा दुरुपयोग गर्न मन पराउँछन्। के उपभोक्ताहरूले साँच्चै ख्याल राख्छन्? एक मार्केटरको रूपमा, मेरो केवल आशा यो हो कि डाटालाई ब्राण्डबाट प्राप्त गरेको अनुभवलाई सुधार गर्न प्रयोग गरिनेछ। कहिलेकाँही यो अलि पनि आशावादी हुन्छ, तर जब म एक प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छु र त्यसपछि अनुभव व्यक्तिगतकृत हुँदैन, म प्राय: अगाडि बढ्छु। तपाईका ग्राहकहरुको बारेमा के छ? के उनीहरूले ख्याल राख्छन् कि तपाईं कसरी प्रत्येक सment्लग्नता र रूपान्तरण बिन्दुमा क्याप्चर डाटाको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ?
एसडीएलबाट आएको इन्फोग्राफिकले कसरी मार्केटरहरूले केहि डाटा साझेदारी गर्ने फाइदाहरूसँग प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गरिरहेका छैनन्, जबकि एकै समयमा उनीहरूसँग भएका डाटाको उपयोग नगरेको - र त्यहाँ केही आधारभूत कुराहरू छन् जुन उपभोक्ताहरू केवल उनीहरूको ब्राण्डसँग साझेदारी गर्न तयार छैनन्। विश्वास छैन। यहाँ केहि खोजहरू छन्:
वफादारी कार्यक्रमहरूको बारेमा ग्राहकहरूले वास्तवमै के सोच्दछन्? तिनीहरूले निःशुल्क उत्पादनहरू हराए। Percent percent प्रतिशत उत्तरदाताहरूले भने कि तिनीहरू वफादारी कार्यक्रमको लागि व्यक्तिगत जानकारी छोडिदिन्छन्, तर 49१ प्रतिशतले नि: शुल्क उत्पादनहरू र सेवाहरूको लागि पनि त्यस्तै गर्नेछन्।
भण्डार ट्र्याकि aboutको बारेमा ग्राहकहरूले वास्तवमै के सोच्दछन्? तिनीहरूले यसलाई अस्वीकार गर्छन्। स्मार्टफोनहरूको साथ उत्तरदाताहरूको ents 76 प्रतिशत खुद्रा विक्रेताहरू उनीहरूको भण्डार चालहरूमा ट्र्याक गर्न सहज छैनन्।
ग्राहकहरूले मोबाइल गोपनीयता सुविधाहरूको बारेमा के सोच्दछन्? तिनीहरूले ती प्रयोग गर्दैनन्। Global२ प्रतिशत विश्वव्यापी उत्तरदाताहरूले विरलै वा कहिल्यै ट्र्याक नगर्नुहोस् वा "इन्कग्निटो" सुविधाहरू प्रयोग गर्दैनन् जसले उनीहरूलाई वेबसाइट ट्र्याकि of अप्ट आउट गर्न अनुमति दिन्छ।
पूर्ण ह्वाइटपेपर डाउनलोड गर्नुहोस्, मार्केटिंग डाटा र उपभोक्ता गोपनीयता: तपाइँका ग्राहकहरूले वास्तवमै के सोच्दछन्.
टैग: उपभोक्ता गोपनीयताडाटा गोपनीयताईन्स्टोर ट्र्याकिंगमोबाइल गोपनीयता
टम्बलर कति ठूलो छ?